Xilka Mas’uuliyadeed iyo Xusuusta Xasuuqii 14 October | Jowhar Somali News Leader
Xilka Mas’uuliyadeed iyo Xusuusta Xasuuqii 14 October
Hal bil ayaa ka soo wareegtay Xasuuqii Zoobe”. Dhimashaada in ka badan 500 ruux, laba laabka tiradaas oo dhaawac ah, maalaayiin hanti bur burtay, oo ay sii dheer tahay raadka maskaxeed iyo kan saykoolaji ee uu reebay , waxaa la oran karaa waa 11 September tii Soomaaliya.
Lama oran karo waa “Masiibo Qaran”, sababtoo ah Masiibadu waa waxa si dabiici ah u dhaca sida; daadka, duufaanta, dhulgariirka iwm. Wixii nagu dhacay 14 Oktoobar waxay ahaayeen “Xasuuq” ay gaysteen rag dagaal soo qaaday.
Shacabka Soomaaliyeed waxay hoggaanka Dalka ka sugayeen in ay jawaab ka bixiyaan farriinta Alshabaab. Jawaabtu waa mid laba weji leh.
Gurmad Degdega ah
Jawaabta ugu horaysa waxay ahayd in gurmad degdeg ah la fidiyo, dhaawaca la kala guro, gargaarna loo fidiyo, maydka la aaso, debka la demiyo, Dadka dhismayaalku ku dumeen laga soo hoos bixiyo.
Dadaalkii iyo is xilqaankii ay dhallinyarada“Gurmad Qaran” gaysteen wuxu ahaa mid muuqda. Ammaan iyo bogaadin ayey mudan yihiin. Dawladda Soomaaliya way dadaashay, gaar ahaan maamulka Gobolka Banaadir. Intii Gargaar dibadeed soo fidisay oo ay Turkiga ugu horeeyaana way muuqatay.
Waxaa la ii sheegay in ilaa 2700 ay gaarayaan agoontii ay ka tageen dadkii halkaas ku shahiiday. Waxaa la ii sheegay in loo qaybiyey lacagihii ay reer Muqdisho iska aruuriyeen, kuwii Puntland iyo Norway laga soo diray. Kenya, Maraykan iyo meelo kalana wax ka soo socdaan. Dawlada 1 Milyan ay balan qaaday ayey Gudiga Gurmadka Qaranka ii sheegeen in aysan weli soo gaarin
Laakiin waxaa weli rahman oo aan ilaa iyo hadda la bixin jawaabtii ay mudnaayeen raggii xasuuqa geystay.
Reer hadii ay geeri gasho tacsi ayaa la dhigaa, waa loo tiiraanyoodaa ruuxa geeriyooday, waana la sabarsiiyaa ehelkiisa.
Laakiin xaalku waa ka duwan yahay haddii reerka la soo weeraro oo dad laga laayo, tacsi lama dhigo, lamana tiiraanyoodo ee waa laga falceliyaa weerarka. Dagaal iyo aargudasho ayaa la sameeyaa. Waxay ahayd in dadka dhiilo iyo falcelis lagu abaabulo, dareenkooda ciilka iyo carada ah awood loo bedelo, cududooda la isku duwo, xooggaga siyaasadeed dhinac la isku keeno wixii khilaaf ah dibadda la iska dhigo danta guud iyo cadowga loo midoobo.
Masuuliyada waa la wada leeyahay, laakiin tan ugu wayn waxay ku dhacaysaa hoggaanka la doortay oo isagu haysta masuuliyada sharci iyo mid macnawi labadaba.
Laakiin waxaa ayaan daro ah in dadkii oo heeloon diyaarna u ah in ay dawlada daba istaagaan la isku dayo in ka masuuliyad gudasho la’aanta lagu daboole, eedayn loo jeedinayo cidii farta ku fiiqda gaabiska ama lagu marmarsiyoodo in lugta la is hayo ama laysla meel dhigo Alshabaab.
Xanuunka xasuustii xasuuqa 14 Oktoobar weli wuu taagan tahay, laakiin su’aashu waxay tahay Al- Shabaab dadkii ay xasuuqeen ma tacsi iyo tiiraanyo ayaan uga harnay?. Mise waxaa ku filan munaasabado isku mid ah iyo khudbooyin isku eg, mise waxaa nala ka sugayaa falcelis run ah oo booto iyo afka baarkiisa dhaafsiisan.
By C/raxmaan C/shakuur
Previous articleSoomaaliya oo daah fureysa Barnaamij ballaaran oo Shaqo Abuur ah
Next articleCiidamada xoogga dalka oo la wareegay deegaano ka tirsan degmada Baraawe